काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा घट्यो यस्तो अनौठो घट्ना, प्रहरी समेत चकित ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा घट्यो यस्तो अनौठो घट्ना, प्रहरी समेत चकित ?
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित नवनिर्मित आकासेपुलबाट हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गर्ने एक युवकको उद्धार गरिएको छ। सोमबार साँझ ८ बजे ती युवक पुलमा चढेर हाम फाल्ने प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी र स्थानीयले हाम फाल्नबाट रोकेका थिए।
प्रहरीले उनको करिब साढे ८ बजे उद्धार गरेको छ। पुलको माथिल्लो भागमा चढेका ती व्यक्ति तीनकुने क्षेत्रतिर मुख फर्काएर बसेका थिए। प्रहरीले पुलमुनि भएर गुड्ने गाडीलाई परै रोकेको थियो भने एउटा लामो खाले ट्रक पुल मुनि मुख्य सडकको दायाँ बायाँ हुने गरि खडा गरिएको थियो। केही प्रहरी पुलमाथि चढेर युवकलाई ओर्लन आग्रह गरेका थिए तर, ती व्यक्ति हाम फाल्ने बताइरहेका थिए।
एक जना प्रहरी पुलको माथिल्लो भागमा चढेपछि भने युवक ओर्लने प्रयासमा अत्तालिएर पुलमा बजारिएका थिए। युवकलाई प्रहरीले अर्धचेत अवस्थामा सिभिल अस्पताल पुर्याएको छ। उनकाे परिचय खुलेको छैन। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ती व्यक्ति मदिरा सेवन गरेर ८ बज्नु अघि नै पुलको माथिल्लो भागमा चढेका थिए। उनको हातमा चक्कुसमेत थियो।
युवकको उद्धार गर्ने प्रयासमा माइतीघर–तीनकुने सडक केहीबेर अवरुद्ध भएको थियो।
धनगढीबाट बाजुरा जाँदै गरेको ना७ख १७४ बस केआईसिंह राजमार्गअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका–१० राईबजार राईबजार नजिकै दुर्घटना हुँदा १६ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा छ महिला, दुई बालबालिका र आठ पुरुष छन् ।
बस ब्रेक फेल भएर आज बिहान दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले जानकारी दिनुभयो । बसमा ५०/६० यात्रु रहेका र सामान्य घाइतेको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।